Madaxweynaha Hir-Shabeelle oo Beesha Caalamka kala hadlay Arrimaha doorashooyinka | Banaadir Times
HomeUncategorisedMadaxweynaha Hir-Shabeelle oo Beesha Caalamka kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan dhinaca khadka Internet-ka ah la yeeshay Xubno ka tirsan Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya.
Xubnaha Beesha Caalamka oo uu horkacayay Wakiilka Qaramada midoobey ee Soomaaliya Amb, Jemis Swan ayaa waxaa ay Madaxweynaha Hir-Shabeelle kala hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha Hir-Shabeelle.
Kulanka ayaa siweyn waxaa ay uga wada hadleen labada dhinac Muhiimadda wadahadalku uu leeyahay iyo baahida degdegga ah ee loo qabo in hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee dalku ay xal ka gaaraan khilaafaadka la xiriira doorashooyinka.
Madaxweynaha Hir-shabeelle Cali Cabdulahi Xuseen ayaa dhankiisa Sheegay inu kaqeyb qaadan doono Howlaha isku keenida ee doorshooyinka, asigoo Qarmada midoobey ugu mahadceliyay dadaalada dib u heshiisiinta iyo Caawinta oo ay la Garabtaagan taha Dowlad Gobleedka Hir-shabeelle.
Previous articleBaarlamaanka Turkiga oo ansixiyay howlgal Ciidan oo ku wajahan Soomaaliya
Next articleBooliska Puntland oo fuliyay howlgal khasaaro geystay